Black Bea Quinoa Salad - Ezi Ntụziaka
piich cobbler na mpekere onwa mpịakọta
Iko isii esi nri osikapa ole akọrọ
ghoro nduku uzommeputa na ohia nri
na-ekpo ọkụ nkịta chili ihendori na mkpọ
Black Bea Quinoa Salad
Black Bea Quinoa Salad bụ mfe ọhụrụ salad nwere ike ịnụ ụtọ dị ka nri ma ọ bụ akụkụ! Icioustọ dị mfe, juputara na veggies ọhụrụ ma jupụta na ekpomeekpo, nke a bụ nri ehihie ma ọ bụ nri abalị zuru oke zuru oke.
Anyị na-agbakwunye mgbe ụfọdụ ọkụkọ ọkụkọ ma ọ bụ ọbụna foduru taco anụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ya (na elu ya a dollop nke utoojoo ude na salsa). Cowboy Caviar dị ka nri
Anọ m na-eje ozi Ọ bụ Caviar na nnọkọ ndị mara mma ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ otu efere onye ọ bụla na-achọ ma ọ dị mma (ma ọ bụrụ na ị gụghị ibe achịcha tortilla n'ihi na ọ bụ maka itule ebe a).
Amaara m nke ọma na m hụrụ n'anya Ọ bụ Caviar Ntụziaka bụ na achọrọ m ịchọta ụzọ m ga-esi mee ya ka ọ bụrụ nri zuru ezu (n'ihi na n'ezie, achọrọ m iji ngaji rie ya).
Naanị ole na ole tweaks dị mfe na mgbakwasa na mgbakwunye nke quinoa, nke a Black Bea Quinoa Salad amuru!
Mfe Quinoa Salad
Ihe kachasị mma bụ na ọ dị mfe ịme!
Ngwakọta dị mfe nke inine ọhụrụ, agwa ojii, ọka na quinoa na akwa zime nke zime na-eme ka nke a bụrụ nri izu ụka zuru oke!
Quinoa dị ọtụtụ!
Ọ bụrụ na ịmebeghị quinoa na mbụ, ọ dị mfe ịme (ị nwere ike ịchọpụta esi esi nri zuru oke quinoa ebe a ). Ọ dị ka osikapa mana achọpụtara m na ọ na-esi nri ngwa ngwa.
Enwere ike iji ya dị ọkụ ma ọ bụ oyi, jiri aka ya jee ozi ma ọ bụ tinye ya na efere n'ọnọdụ osikapa.
Gaa n'ihu: Black Bean Quinoa Salad bụ nri zuru oke na otu nnukwu efere ma nwee ike ịme tupu oge eruo. Ọ ga-edebe ụbọchị ole na ole na-eme nri ehihie zuru oke! Ọ bụrụ na ị na-eme tupu oge eruo, ọ ga-akara m mma ịhapụ ube oyibo ahụ na nhazi ma gbakwunye ụfọdụ tupu ị na-eje ozi.
Uru Dị Ukwuu Ahụ Ike
Quinoa Salad jupụtara na ịdị mma! chee nkpuru a dika nkpuru, o bu carb zuru oke zuru oke ka o tinye n'ime nri anyi ma buru protein!
Mgbe m na-agbakwunye ihe ọkụkụ kachasị amasị m na Mexico, ị nwere ike gbanwee salad Black Bean Quinoa a site na ịtinye na ọkacha mmasị gị (ma ọ bụ ihe ọ bụla ị nwere n'ime ngwa nju oyi). Ọ bụrụ na ị ga-emefu tacos & fixings ma ọ bụ rifọrọ ndochi fajita , ha niile na-eme nnukwu mgbakwunye. Enweekwara m chickpeas maka agwa ojii na salad a dị mfe kemgbe m hụrụ n’anya Chickpea Salad nke ukwuu!
A na-eji akwa ngwa ngwa a na-eji ngwa ụlọ eme ngwa ngwa a. Nwere ike iji ụlọ ahịa kachasị amasị gị zụta mgbakwasa (akwa mmanya mmanya na-acha ọbara ọbara bụ ezigbo nhọrọ).
Anwale na Ezi Quinoa Salad Mgbakwasa
Nke a quinoa salad dressing a nwalere ọtụtụ oge. Ndụmọdụ ole na ole iji jide n'aka na ọ dị ụtọ:
Ejila mmanụ oliv Extra ọzọ. Okpukpo ilu (nke m na-anabatakarị n'ọtụtụ efere), anaghị agwakọta nke ọma na uzommeputa a.
Ebumnuche ahụ ka ọ bụrụ ìhè na ihe ọhụrụ na uzommeputa a, ọ bụrụ na ịchọrọ salad mara mma nke ukwuu, ị nwere ike itinye mgbakwunye ọzọ.
Jiri ihe ọ juiceụ juiceụ wayo ọhụrụ. Wayo ọhụrụ na-efu ihe dị ka $ 0.50 ma ọ bara uru na ọla edo mara mma. (Detuo uzo abuo n’akuku na m kwere gi nkwa na igaghi azuta azu mmiri ogwu).
Salad ahụ ga-esi na mgbakwasa ahụ ka ọ na-anọdụ ka ị wee nwee ike ịgbakwunye ma ọ bụ obere dabere na oge.
Kwadebe quinoa gị na broth (kama mmiri) maka ekpomeekpo ọzọ.
A na m enyekarị salad beino quinoa ojii a dị ka nri ehihie ma ọ bụ akụkụ ọ bụla mana ọ na-eme isi anụ na-enweghị anụ. Ọ bụrụ n’inwere anụ taco fọdụrụnụ ma ọ bụ ọkụkọ eghere eghe, ha zuru oke agbakwunye na uzommeputa a!
More Salads Na-eri Dị Ka Nri
Greek Quinoa Salad - Akwa ime tupu oge eruo.
Tomato Avocado Salad - The zuru okè n'oge okpomọkụ n'akụkụ nri
Mfe Taco Salad - Ezigbo ezinụlọ (jiri anụ ehi ma ọ bụ toki)
Pasta nke Italy - ọkacha mmasị Potluck
Pottọ Nduku Salad - Otutu ekpomeekpo!
4,96site nairi abụọ na otuvotu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe30 Nkeji Oge nri0 Nkeji Oge zuru ezu30 Nkeji Ọrụ8 servings Onye edemedeHolly NilssonIcioustọ dị mfe, juputara na nri ọhụrụ a na-atụgharị ya na akwa akwa akwa, nke a bụ nri ehihie ma ọ bụ nri abalị zuru oke. Bipute Ntụtụ
▢1 iko anụghị quinoa
▢abụọ iko mmiri ma ọ bụ ofe
▢abụọ roma tomato okpokoro
▢1 mfri eke ube oyibo okpokoro
▢iri na ise ounce agwa agwa 1 nwere ike, kpochapu ma kpochapụ
▢12 ounce ọka 1 nwere ike ịgbapụ
▢1 mgbịrịgba okpokoro
▢¼ iko yabasị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ okpokoro
▢1 ose jalapeno mkpụrụ ma gbue
▢⅓ iko cilantro gbanwere
▢¼ iko mmanụ ihe oriri
▢1 ½ ngaji wayo
▢1 ngaji shuga
▢1 ngaji kumin
▢¼ ngaji ntụ ntụ
▢½ ngaji mmanya mmanya uhie
▢⅛ ngaji nnu
▢¼ ngaji ose
Cook quinoa dị ka usoro ngwugwu ma kwe ka ajụkwa.
Ikpokọta quinoa, tomato, ube oyibo, agwa ojii, ọka, ose mgbịrịgba, yabasị na-acha akwụkwọ ndụ, jalapeno na cilantro na nnukwu efere.
Na obere efere, jikọta ihe niile eji ejiji ma jikọta ya nke ọma. Wunye akwukwo nri ma kpoo ya. Tinye quinoa na ikpokọta.
Friji ruo mgbe ị ga-eje ozi.
Calorisị:206,Carbohydrates:22g,Protein:4g,Abụba:iri na otug,Abụba Ajuju:6g,Sodium:65mg,Potassium:333mg,Eriri:4g,Sugar:4g,Vitamin A:Ogbe 725IU,Vitamin C:Ogbe 27.3mg,Calcium:19mg,Iron:1.5mg
Isiokwuojii agwa quinoa salad N'ezieNri abalị, nri ehihie, efere akụkụ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Megharịa Ntụziaka a dị mfe
Nnukwu nri ndị ọzọ
Mfe Greek Pasta Salad
Ọ bụ Caviar